Shiinaha Mercedes Benz Gawaarida Gawaarida Gawaarida & Kaarka, Kaarka Shaashadda LCD, A4 Habeeye Daabacaadda Soosaarida Dhiirrigelinta Gawaarida iyo Warshad | Buug-gacmeedka
Buugga Mercedes Benz Gawaarida Gawaarida Gawaarida & Kaarka, Kaarka Shaashadda LCD, A4 Habeeye Daabacaadda Dhiirrigelinta Gawaarida
1. Kaararka buug-yaraha fiidiyowga waxaa loo isticmaali karaa warshado badan oo loogu talagalay dhiirrigelinta ganacsiga. Waxay ku habboon tahay warshad kasta sida Real Estate, Medicine, Hadiyad waxbarasho. IWM
2. Marka la barbardhigo buug-yaraha wax soo saarka dhaqameed, kaararkayaga salaanta fiidiyowga waxaa loo isticmaali karaa in lagu ciyaaro fiidiyowga, muusigga iyo sawirrada.
3. Waxaad ku samayn kartaa adiga oo qaabeeya. xirfadda iyo fiidiyowga la isku daray ee ku jira buug-yaraheena fiidiyowga natiijada. Waxay ka dhigeysaa aragti waara macaamiisha aad bartilmaameedsato.
1. Kaararka Salaanta Fiidiyowga waxaa loo isticmaali karaa warshado badan oo loogu talagalay dhiirrigelinta ganacsiga. Waxay ku habboon tahay warshad kasta sida Real Estate, Medicine, Hadiyad waxbarasho. IWM
QODOBADA KHASASKA AH
Shaashadda LCD Dijital LCD 2.4 inji, 4,3 inji, 5 inji, 7 inji, 10.1 inji
Batariga dib loo buuxin karo 300mAh / 400mAh / 500mAh / 650mAh / 1000mAh / 1500mAh / 2000mAh / 3000mAh
Xusuus 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB
Badhamada Volume +, Volume-, Play / Pause, Fastward, Rewind, Video Selection (optional)
USB Port Mini USB dekedda --- 5 Pin, 2.0 Dekedda Mocro USB --- 5 Pin, 2.0
Beddel Wareejinta Magnetic Awooda DAAR / JAR
Daabacaadda CMYK 4 midab Midab khafiif ah Midab gaar ah
Qaab Video ah AVI, MP4, RMVB ect.
Dhamaaday Spot UV, bireed, qalin, Dahab iwm (Matte iyo Laylinta dhalaalaya ayaa lagu daray)
1. Waxaan u sameynaa kala-beddelo kala duwan kaararka salaanta fiidiyowga:
Bedelaadda 'magnetic': marka aad furto badeecada, Waxay si toos ah ugu ciyaari kartaa fiidiyaha; Markaad xirto, way joogsatay inay shaqeyso
Badhanka badhanka / dabka: waxaad ku dari kartaa badhanka / deminta, markaad riixdo, waxay bilaabeysaa inay shaqeyso; markaad riixdo agaign, Waxay joojisay shaqadii
Bedelaha dareeraha dhaqaaqa: Waxay bilaabmaysaa inay shaqeyso markii aad hor marto dareeraha dhaqdhaqaaqa, Waxay joojisay shaqadii markii aad tagtay.
2. Kaadhadhka salaanta fiidiyowga waa lagu dari karaa badhamooyin badan oo shaqeynaya: ciyaar / hakad, hore, soo socota, mugga, mugga hoos, aamusnaanta, dib u bilawga, badhanka fiidiyowga (ciyaar fiidiyowga aad u baahan tahay), badhanka sawirka, Badhanka Muusikada iwm.
3. Waad gali kartaa fiidiyowga, muusigga iyo faylalka sawirka wakhti kasta oo aad u baahato. Waxaad u isticmaali kartaa kaararka salaanta fiidiyowga sidii U-Disk. Markaad ku xirto buug-yaraheena fiidiyoowga kombiyuutarka ama adabtarada, Waa laguu soo celin karaa.
4. Markaad dib u buuxineyso kaararka salaanta fiidiyowga, fadlan marka hore xir sheyga. Way fududahay in qoyaanku ku saameeyo.isga ilaali biyaha.
5. Taabashada taabashada waxaa lagu taageeray 4.3 inji, 5 inji, 7 inji iyo 10 inji oo yar yar oo brochures ah.
6. Badeecadeena caadiga ah waa cabirka A4, cabirka A5, cabbirka loo habeeyay waa la soo dhaweynayaa. Waxaad ku sameyn kartaa cabirka aad u baahan tahay.
7. Waxaad dooran kartaa cabbirka shaashadda, cabirka batteriga iyo cabirka xusuusta sida aad jeceshahay. Buug yaraheena fiidiyowgu wuxuu leeyahay qiime ballaaran. Waxay ku habboon tahay dhammaan macaamiisha.
8. Naqshad u gaar ah oo aad dooratay, sida shaashad, shaabad kulul oo dahab ah ama sibidhka iwm ...
9. Nidaamka la taageeray: WIN7, WIN8, XP, Mac, iwm…
Codsiga qoraalka yar ee IDW:
P Qiimaha Tooska ah ee Warshadda.
Products Alaabta patentka, nashqadaha gaarka loo leeyahay.
Quality Tayada aaminka ah.
Technology Teknolojiyada & Adeegyada Xirfadeed.
Time Waqtiga Lead Lead.
Go Logo Degdeg ah caddeyn muuqaal ah.
Qu Xigasho Degdeg ah.
Recognition Aqoonsiga macaamiisha.
1. Ku jawaab jawaabtaada 24 saacadood oo shaqo ah.
2. Shaqaalaha xirfadleyda ah waxay su'aalahaaga oo dhan ugu jawaabaan Ingiriis sax ah.
3. Qiimaha tooska ah ee warshadda, wax soo saar tayo sare leh iyo adeegyo xirfadaysan.
4. Naqshad qaabaysan ayaa la heli karaa.
5. Jimicsi iyo xal u gaar ah waxaa siin kara macaamiisha shaqaalaheena si wanaagsan loo tababaray oo xirfadlayaal ah.
6. Adeegyada kadib-iibinta iyo tignoolajiyadda-ayaa la heli karaa.
7. Waqtiga damaanadda: 1 sano.
Shaqaale xirfad leh iyo soosaarid farsamo oo isdaba-joog ah, waxaan ku siin karnaa macaamiisheenna alaab tayo sare leh oo ay ku qanacsan yihiin macaamiisheennu.
Waxaan ka taxaddarnaa ma ahan oo keliya qalabka elektarooniga ah, laakiin sidoo kale daabacaadda midabada, dhimista goynta, isu soo ururinta iyo wixii la mid ah si loo hubiyo in aan siino alaabada ugu fiican macaamiisheenna.
Xirxirida & Shixnad:
Kartoonno adag oo loogu talagalay maraakiibta badbaadada-Waxaan u adeegsannaa kartoonnada adag oo alaabada si ammaan ah u ilaalin doona markay rartaan. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira dhogor luul qaro weyn oo u dhexeeya kaararka iyo alaabada si loo ilaaliyo alaabta.
Hore: Colgate Martiqaad Ganacsi Cusub LCD Buugga Hadiyadaha Digital TFT shaashadda Kaarka Salaanta Video
Xiga: Buug-gacmeedka Astrazeneca 7inch ee daabacan ee adag ee fiidiyowga ganacsiga oo leh jeebka kaarka ganacsiga
Astrazeneca 7inch la qaadan karo oo adag busbus video ...
Smart 8 Inch alwaax Digital Kalandarka Maalinta Clock Id ...
F9 Tws 5.0 Dhab ahaantii Wireless HIFI Stereo Headset Ea ...
kartoo 7 inch LCD shaashadda iftiinka iftiinka musi ...
Digital Wall Clock WiFi Smart Cays Maalmo Cloc ...
Universal Automatic Qabsashada Qi Wireless Car Ch ...